Xubnaha guddiga FEIT ee gaaray Garbahaarey oo shaaciyey qorshe xasaasi ah - Caasimada Online
Home Warar Xubnaha guddiga FEIT ee gaaray Garbahaarey oo shaaciyey qorshe xasaasi ah
Xubnaha guddiga FEIT ee gaaray Garbahaarey oo shaaciyey qorshe xasaasi ah
Garbahaarey (Caasimada Online) – Waxaa shalay magaalada Garbahaarrey ee xarunta gobolka Gedo gaaray xubno ka tirsan guddiga hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya ee heer federaal iyo kan xallinta khilaafaadka.
Xubnahaas ayaa sheegay in ujeedada ay halkaasi u tageen ay tahay qiimaynta ah in ay magaaladu diyaar u tahay in doorasho lagu qabto iyo sidii doorashada kuraasta baarlamaanka ee taalla magaaladaas loo qaban lahaa.
Arrintan ayaa timid iyadoo ay soo baxayso kala qaybsanaan guddiga FIET dhexdiisa ah, xilli guddoomiyaha guddiga doorashada heer Federaal iyo xubno la socda ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo iyagoo doonaya in kuraasta Garbahaarrey taalla lagu qabto magaalada Ceelwaaq.
“Annagu waxaan nahay guddiyada hirgelinta doorashooyinka ee FEIT iyo xallinta khilaafaadka. 6 xubnood oo guddiga FEIT ah iyo 4 xallinta khilaafaadka ka socda ayaan ku gaarnay magaalada Garbahaarrey,” ayuu yiri Cabdiweli Maxamuud Cilmi oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka ee tagay magaaladaas.